Badrooni shaqaalihiisa mushaar uga dhigay $70,000 |
Badrooni shaqaalihiisa mushaar uga dhigay $70,000
Sanadkii 2015, badroonigan oo madax ka ah shirkad ku taalla Seattle, dalka Mareykanka ayaa qof walboo shaqaalihiisa 120-ka ka mid ah u qoray mushaar gaaraya $70,000 – wuxuuna isaga iska jaray $1m oo gunno uu u heli jiray. Shan sano kaddib wxuu aaminsan yahay inuu ku guuleystay.
“Waa qof lagu yaqaanno howlkar iyo sharaf,” ayuu yiri.
Markii uu jiray 31, Price wuxuu ahaa milyaneer. Shirkaddiisa, Gravity Payments, oo uu xilligii uu yaraa aasaasay, waxay lahayd ilaa 2,000 oo macmiil waxaana qiimaheeda lagu qiyaasay malaayiin doollar. Inkastoo uu sanadkii qaadanayay $1.1m, Valerie ayaa u sheegtay in laga yaabo in inta badan shaqaalihiisa ay dhibaato ku jiraan – wuxuuna go`aansaday inuu taas beddelo.
“Dadku wa macluulayaan amaba waa laga faa`iideystay, si qof kale uu guri weyn uga yeesho magaalada New York uuna kuraas dahab ah ku fadhiisto.
“Waxaan bulsho ahaan dhiirri gelinnaa dhuuninimada. Liiska Forbes ayaana ah tusaalaha ugu xun – ‘Bill Gates waxaa ninka dunida ugu taajirsan kala wareegay Jeff Bezos.’ Maxaa naga galay!?”
“Kahor inta aan la bilaabin mushaarka $70,000, waxaa shaqaalaha dhan sanadkii u dhalanayay labo carruur ah,” he says.
“Kaddib markaas – keliya afar sano iyo bar kaddib – waxaa dhashay in ka badan 40 carruur ah.”
“Maalin walba caqabado ayaa jira,” ayuu yiri.
“Waxaan isku da` nahay Mark Zuckerberg waxaana isoo mara maalmo madow oo aan ku fekerayo, ‘Inaan taajir u noqdo sida Mark Zuckerberg waxaana doonayaa inaan la tartamo oo liiska Forbes la igu soo daro. Waxaana rabaa inaan ku soo baxo bogga hore ee Time magazine, anigoo lacag badan sameynaya.’ Dhammaan waxyaabahaas ayaa i riixaya.”
“Ma aha wax fudud in isbeddel la sameeyo. Balse nolosheyda hadda aad ayay u fiicna tahay.”